Stipple: Akangwara uye Anopindirana Mifananidzo | Martech Zone
China, January 10, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ko kana iwe ukakwanisa kutumira mifananidzo kune webhusaiti yako kana blog, zviite kuti zvibatanidzane, uye uwane mashandisirwo uye kumaka kufamba navo sezvavanoteedzerwa kubva kune yako saiti uye kuchengetwa kune imwe? Unogona kuita izvi izvozvi ne Kugumburwa. Stipple zvakare inogonesa ruzivo rwekushandisa kuburikidza neyavo analytics package. Mouseover iyo pazasi mufananidzo kuti uone Stipple muchiito!
Unogona kuona matiki ekupindirana andakawedzera kune uyu mufananidzo wehofisi yedu - mepu, Facebook, Twitter, uye kunyangwe yekutenga teki kwaunogona kutenga bhuku rangu. Chimwe chezvinhu chandinotenda kuti Stipple inogona kushandiswa zvine mutsindo kubva kubva pakushambadzira maonero kushambadzira infographics! Kuva nekwanisi yekuwedzera mafoni uye kuteedzera mashandisirwo eiyo infographic zvinogona kubatsira zvisingaite kune chero organication.
Iyo yekumaka uye manejimendi injini yemahara uye yakavakirwa senzvimbo yekugovana application.
Heino vhidhiyo pfupiso yeiyo tekinoroji:
Kugumburwa ine plugins yakagadzirirwa WordPress uye mamwe masisitimu manejimendi manejimendi kuti aenzanise otomatiki uye kurodha mifananidzo kubva kublog rako.
Stipple ichashandiswa pamifananidzo kubva ku Vatsoropodzi 'Sarudzo Movie Mubairo. Takabatana na VANHU, vateveri vanogona kuongorora uye kutenga iyo 'Mafirimu neFashoni' yekapeti tsvuku kuburikidza PEOPLE.com kufukidzwa kweVatsoropodzi 'Sarudzo Movie Awards. Stipple's yekudyidzana tekinoroji ichaita kuti vateveri vadzidze zvakawanda nezve nyeredzi, mafirimu avo, uye masitayera. Iyo Yevatsoropodzi 'Sarudzo Movie Awards ichaitwa neChina, Ndira 10, na8pm EST. Iyo tsvuku kapeti pre-show inotanga na6pm EST.
Tags: mufananidzo analyticsmufananidzo wekudaidzirakumaka mufananidzokushandiswa kwemifananidzokugumbuka